Shidaal - Gpedia, Your Encyclopedia
Deegaanada ugu badan kheyraadka saliida dabiiciga ah ee dunida.
Shidaal sidoo kale loo yaqaano Saliida Dhulka (ingiriis: Petroleum) waa dareere ka mid ah kheyraadka dabiiciga ah, ur badan, midab huruud ilaa madoow ah leh, ka samaysan isku dhisyo haydarokaarboon ah, oo laga helo oogada dhulka hoosteeda.
Ereyga shidaal waxaa la isku yidhaadhaa, saliida dabiiciga ee qayriin ee dhulka laga helo (crude oil) iyo betroolka la sifeeyay ee la isticmaalo.
Shidaalku wuxuu ka samaysmay markii tiro badan oo noole dhintay ah - u badan dhir iyo algea - ku aasmeen dhagaxa sedimentary hoostiisa, halkaas oo cadaadis iyo kul badan ku helay malaayiin sano ka hor.
Isticmaalka warshadaha, gaadiidka, diyaaradaha, tareennada iwm ka sokoow, Shidaalka waxaa laga sameeyaa sheeyo aad u badan, waxaana lagu qiyaasaa in dunidu cunto 90 milyan oo foosto maalin kasta.
Shidaalku si fudud ayuu ula falgalaa dabka taas oo keenta in qiiq badan oo sun ah ku sii deeyso cirka isla markaana keenta hawo wasakhoow.
Qalinkii: Fadxi Garaad Ciise
Sifeynta Shidaalka Qaydhiin
Marka la soo saaro saliida shidaalka qaydhiin waxa la geeyaa warshadadaha lagu sifeeyo shidaalka kuwaas oo ku sii daaya kul heerkulkiisu sii kacayo marba marka ka dambeeysa. Nidaamkan oo loo yaqaano Habka Sifeynta Shidaalka (distillation fractions of petroleum) ayaa waxa ku soo baxa noocyo badan oo kala duwan oo shidaal ah. Sida, shidaalka dareere-neefta ah (liquefied petroleum gas) (LPG), Butane, Butane, shidaalka diyaaradah xawaaraha dheer (Jet fuel), Kerosene, saliida shidaalka (fuel oil), iyo Naafto. Intaasi kuma koobna ee waxyaalo kale ayaa ka soo baxa sifaynta shidaalka, sida Gaaska aan faynuuska u isticmaalno, Gaamurka iyo sheeyo kale.
Sifeeynta iyo Jajabinta Shidaalka
Noocyada Soo Baxa
Barta Kululeynta oC
Shidaalka Dareere-Neefta (PLG) −40
Butane −12 ilaa −1
Betrool −1 ilaa −110
Shidalka Diyaaradaha 150 ilaa 205
Kerosene 205 ilaa 260
Saliida Shidaalka 205 ilaa 290
Naafto 260 ilaa 315
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shidaal&oldid=188423"